Zakaria 4 - Ny Baiboly
Zakaria toko 4
Fahitana an'ilay fanaovan-jiro sy ny hazo oliva roa - Fanoharana ny lela fanaovan-jiro fito - Fivilian-kevitra ny amin'ny anjara raharahan'i Zorobabela - Fanoharana ny hazo oliva roa.
1Niverina ilay anjely niresaka tamiko, ary nofohaziny, toy ny famoha olo-matory, aho, 2sy nilazany hoe: Inona no hitanao? Ka hoy ny navaliko azy: Nahita aho ka inty fanaovan-jiro maro rantsana iray, tena volamena izy manontolo misy tavy eo an-tampony, mitondra lalampy fito amam-pantsona fito avy amin'ireo lalampy eo an-tampon'ny fanaovan-jiro. 3Ary hazo oliva roa no manotrona azy, ny iray eo an-kavanan'ny tavy, ary ny iray eo an-kaviany.
4Dia notohizako ny teniko, ka hoy aho tamin'ilay anjely niresaka tamiko: Inona no hevitr'ireo zavatra ireo, tompoko? 5Namaly ilay anjely niresaka tamiko ka nanao tamiko hoe: Tsy fantatrao va ny hevitr'ireo zavatra ireo? Ary hoy ny navaliko azy: Tsia, tompoko. 6Dia namaly niteny ilay anjely ka nanao tamiko hoe:
Izao no tenin'ny Tompo amin'i Zorobabela, izany hoe: Tsy amin-tafika, na amin-kery, fa amin'ny Fanahiko, hoy Iavehn'ny tafika. 7Iza moa hianao, ry tendrombohitra lehibe, eo anoloan'i Zorobabela? Ho tany lemaka ihany hianao, ary izy hanangana ny vato hatao tendrony, eo amin'ny fihobiana hoe: Fahasoavana, fahasoavana anie ho aminy!
8Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe: 9Ny tànan'i Zorobabela no nametraka ny fanorenan'ity trano ity, ary ny tànany koa no hamita azy; ka dia ho fantatrao fa Iavehn'ny tafika no naniraka ahy ho aminao. 10Fa iza no hanamavo ny andron'ny zava-madinika? Hifaly izy ireo mahita ny pilao eny an-tànan'i Zorobabela.
Ireo lalampy fito ireo, dia ny mason'ny Tompo mitety ny tany rehetra.
11Dia niteny indray aho, ka nanao taminy hoe: Inona ireto hazo oliva roa, eo an-kavanan'ny fanaovan-jiro sy eo an-kaviany? 12Mbola niteny fanindroany koa aho, ka nanao taminy hoe: Inona ireo sampahon'oliva roa eo amin'ny lantonoara volamena, ikararanam-bolamena, ireo? 13Niteny tamiko izy nanao hoe: Tsy fantatrao va ireo? Ka hoy ny navaliko azy: Tsia, tompoko. 14Ary hoy izy tamiko: Ireo no zanaka roan'ny fanosorana, izay mitsangana eo akaikin'ny Tompon'ny tany rehetra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0231 seconds